Shina ho any Sierra Leone-Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Momba ny SHL
Fitaterana entana mavesatra
Angatahana sy fametrahana
Ny fitaterana làlana iraisam-pirenena
Fitaterana làlana any Eropa
Shina mankany amin'ny Asia Central CentralIIn'ny fitaterana làlana iraisam-pirenena
Fitaterana làlana iraisam-pirenena Russia
Fitaterana an-dalambe any Mongolia
Fitaterana làlana any Nepal
Fitaterana an'habakabaka Asean
Fitaterana an-dalambe ao Pakistan
Ny lozisialy fampirantiana
Fitaterana fitaterana olona
Fiatrehana fiaramanidina mavesatra
Faritra atsimo atsinanana
Shina mankany Korea
Shina mankany Japon
Shina mankany Philippines
Shina mankany Vietnam
Sina mankany Laos
Sina mankany Kambodia
Shina mankany Myanmar
Shina mankany Thailand
Shina mankany Malaysia
Shina mankany Singapore
Shina mankany Indonezia
Firenena ao Azia Afovoany
Sina mankany Kazakhstan
Sina mankany Tajikistan
Sina mankany Ozbekistan
Sina mankany Turkmenistan
Sina mankany Mongolia
Sina mankany Nepal
Sina mankany Bhutan
India Line Line
Shina mankany Bangladesh
Shina mankany India
Sina mankany Sri Lanka
Shina mankany Pakistan
Zotra Afovoany Atsinanana
Sina mankany Emirà Arabo Mitambatra
Sina mankany Iràka
Shina mankany Iran
Shina mankany Syria
Sina mankany Jordana
Shina mankany Egypt
Sina mankany Libanona
Shina mankany Israely
Sina mankany Arabia Saodita
Sina mankany Bahrain
Sina mankany Qatar
Sina mankany Kuwait
Sina mankany Oman
Shina mankany Yemen
Sina mankany Afghanistan
Ranomasina Mediterane sy Ranomasina Mainty
Sina mankany Finland
Shina mankany Soeda
Shina mankany Norvezy
China ka hatrany Danemark
Shina mankany Litoania
Shina mankany Rosia
Shina mankany Ukraine
Shina mankany Polonina
China ka Czech
Sina mankany Hongria
Shina mankany Alemana
Shina mankany Aotrisy
Shina mankany Switzerland
Shina mankany Fanjakana anglisy
Sina mankany Irlandy
Shina mankany Holandy
Sina mankany Belzika
Shina mankany Frantsa
Shina mankany Romania
Sina ka hatrany Gresy
Shina mankany Italia
Shina mankany Espana
Sina mankany Portugal
Sina mankany Turkey
Sina mankany Libya
Sina mankany Sudan
Sina mankany Tonizia
Sina mankany Algeria
Shina mankany Maraoka
Sina mankany Etiopia
Sina mankany Djibouti
Shina mankany Kenya
Sina mankany Tanzania
Sina mankany Sierra Leone
Sina mankany Liberia
Sina mankany Ghana
Sina mankany Afrika Atsimo
Shina mankany Maorisy
Australia sy New Zealand Line
Shina mankany Aostralia
Sina mankany Nouvelle-Zélande
Sina mankany Papua New Guinea
Shina mankany amin'ny Nosy Solomon
Iine Amerikanina Avaratra
Shina mankany Canada
Shina mankany Etazonia
Sina ka hatrany Meksika
Laharana Amerika atsimo
Sina mankany Kolombia
Shina mankany Venezoelà
Sina mankany Peru
Sina ka hatrany Brezila
Shina mankany Chili
Shina mankany Argentina
Sina mankany Uruguay
Fitaterana entana mavesatra ary fitaterana mavesatra
Tapaka ny ampahany
Door iraisam-pirenena mankany Door
Fitaterana entana any ivelany
Fitaterana rivotra / ranomasina
Ekena fiaran-dalamby nohafarana
Indostria metallurgy simika
Indostrian'ny fananganana injeniera
Indostria asa fanamboarana trano
Indostrian'ny fanamboarana fiara
Fepetra fiarovana ny asa / kojakoja fitsaboana
Orinasa mpanamboatra fitaovam-pitaterana entana
Indostrian'ny trano fanamboarana trano
Midira ao amin'ny SHL
Mifandraisa amin'i SHL
Home>Serivisy serivisy>Africa Line>Sina mankany Sierra Leone
Ranomasina Mediterane sy ranomasina mainty Eropa
American American Line
Fandefasana entana avy any Shina mankany Sierra Leone
Ny ankamaroan'ny mpanjifantsika dia miorina ao amin'ny Sierra Leone, noho izany dia nanjary tsena lehibe ho antsika izy io. Nanao sonia ny tahan'ny fifanarahana izahay miaraka amin'ireo mpitatitra toy ny COSCO, OOCL, APL, EMC, MSK, ary HMM. Ireo fifandraisana ireo dia avelao izahay hanome anao saram-pitaterana tsara be rehefa mandefa avy any Shina mankany amin'ny seranan-tsambo any Sierra Leone.
Miaraka amin'ny SHL amin'ny maha mpiara-miombon'antoka, ny fandefasana entana avy any Chine ho any Sierra Leone dia ho mora kokoa, ianao ihany no mila mandao ny entanao miaraka aminay, ary hanao ny ambiny izahay. Ny SHL dia mikendry ny ho lasa mpandefa entana tsara indrindra anao avy any Chine mankany amin'ny Sierra Leone. Mangataha fomba fijery tsara kokoa izao.
Fandefasana entana Ro-Ro / Break Bulk avy any Chine ho any Sierra Leone
Ny SHL dia afaka manome RORO ROROMAFI BREAKBULK ho an'ny fitaovana famepetra, fiara ary fitaovana mavesatra avy any Chine ho any Sierra Leone Afaka manolotra vahaolana iray mijanona sy sahaza.
Fandefasana entana an-dranomasina avy any Chine ka hatrany Sierra Leone
Azontsika atao ny manome ny vidin'ny fivezivezena an-dranomasina, ary ny vahaolana tsara indrindra, miorina amin'ny fotoana fandefasana anao rehefa mandefa avy any Shina mankany amin'ny seranan-tsambo any Sierra Leone (indrindra fa ny seranana an-tsambo).
Fandefasana entana an'habakabaka avy any Shina mankany Sierra Leone
Izahay dia hisafidy ny fiaramanidina azo tanterahina indrindra ho an'ny fandefanao mifototra amin'ny fitakian'ny fotoana. SHL no vahaolana tsara indrindra amin'ny fampitana entana an-tsambo mankany Shina mankany Sierra Leone.
Fandefasana mora indrindra avy any China ho any Sierra Leone
Miankina amin'ny hoe firy ny entana alefanao avy any Chine ka hatrany Sierra Leone, raha tsy maika ianao miaraka amin'ny santionany kely dia azonao atao ny mampiasa ny China Post na maneho toy ny DHL, raha manana entana maro kokoa ianao, dia ifandraisa amin'i SHL, ho azonao ny tsara indrindra vitantsika. ny tahan'ny fandefasana entana avy any Sina mankany Sierra Leone.
Ohatrinona ny fandefasana lava / ohatr'i Shina mankany Sierra Leone
Ny entana an-dranomasina mandritra ny 10 ka hatramin'ny 30 andro miankina amin'ny seranan-tsambo sy ny seranan-tsambo. Ny fivezivezena ny rivotra 1 ka hatramin'ny 5 andro miankina amin'ny raha misy fiaramanidina mivantana. Ny saram-pandefasana miankina amin'ny habetsan'ny entana entinao, ny fomba fandefasana ary ny fotoana fandefasana. Ny antsipiriany azafady manontany ny ekipa mpanohana anay.
Door to Door Shipping avy any Shina mankany Sierra Leone
Na amin'ny filan'ny tena manokana na ny orinasanao dia afaka manome serivisy serivisy amin'ny serivisy fandefasana varavarana ho anao izahay, izay ahitàna ny fangatahana fanao amin'ny Sierra Leone.
Ny fandefasana entana tsara indrindra avy any Chine ka hatrany Sierra Leone
Manomeza vidiny an-dranomasina sy fifamoivoizana an'habakabaka manomboka any Shina mankany amin'ny Sierra Leone.
Alariro ny volony amin'ny sarany eo an-toerana amin'ny alàlan'ny teny FOB mba hialana amin'ny fitarainana amin'izy ireo.
AMS sy ISF natolotra ara-potoana.
Serivisy trano fitehirizana maimaim-poana any amin'ny tanàna any Chine.
Traikefa be dia be amin'ny fandefasana entana mampidi-doza sy lehibe.
Taratasy taratasy matihanina natao ho anao.
Serivisy 24/7 amin'ny Internet mba hanohanana ny orinasanao.
Seranan-tsambo any Shina
Taizhou (Avaratr'i Wenzhou) Wenzhou Changle Quanzhou
Yingkou Jinzhou Taizhou (atsimon'i Wenzhou) Qinhuangdao
Fanamarihana: Tokony halefa any amin'ny seranan-dranomasina mora alefanao ny entanao ka ahafahanao misosa mora foana avy any Chine mankany UK
Seranam-piaramanidina lehibe any Sina
Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Hangzhou Xiaoshan Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Taiyuan Wusu
Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Kunming Changshui Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena ao Beijing
Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ao Shanghai Pudong Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Chengdu Shuangliu
Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Hong Kong Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Xianany Xianyang
Seranam-piaramanidina Shenzhen Bao'an Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Xiamen Gaoqi
Guangzhou Baiyun International Airport Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Changsha Huanghua
Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Qingdao Liuting Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ao Wuhan Tianhe
Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Haikou Meilan Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ÜrümqiDiwopu
Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Shijiazhuang Zhengding Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Tianjin Binhai
Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena ao Phoenix Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Harbin Taiping
Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Guiyang Longdongbao Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Lanzhou Zhongchuan
Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Dalian Zhoushuizi Seranam-piaramanidina XishuangbannaGasa
Seranam-piaramanidina lehibe any Sierra Leone
Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Lungi Seranam-piaramanidina Daru
Seranam-piaramanidina Gbangbatok Seranam-piaramanidina Hastings
Ny maodely fandefasana avy any Chine ka hatrany Sierra Leone
Isaky ny manafatra entana avy any Shina mankany Sierra Leone ianao dia afaka misafidy mode maro fandefasana entana.
Ny fomba fandefasana dia miankina amin'ny:
1. Ny vidin'ny fandefasana
2. Karazana entana sy toetran'ny entana
3. Afaka misy habaka, izany hoe endrika volumetika no lakile amin'ny entana an-dranomasina
4. Na handeha amin'ny alàlan'ny entana an-dranomasina na ianao
Ka inona no safidy tokony hodinihinao?
Fandefasana Roll-on / Roll-off
FIVAROTANA FARANY BREAK
Fandefasana entana feno (FCL) Fandefasana feno
Fandefasana entana kely kokoa noho ny fandefasana entana (LCL)
Fandefasana entana avy any Gauge (OOG).
Seranan-tsambo inona no tokony hampiasaiko handefasana avy any Chine ka hatrany Sierra Leone?
Betsaka ny seranan-tsambo any Sina ary nasongadiko ny ankamaroany ao amin'ity torolàlana ity.
Saingy, ho toy ny fitsipiky ny ankihavanana, ampiasao ny iray akaiky kokoa ny mpamatsy anao.
Mila miady hevitra amin'ny mpampita entana ianao.
Satria mila seranana afaka mampifandray anao mivantana amin'ny Sierra Leone ianao
Amin'ity fomba ity, hamonjy fotoana sy vola ianao.
Isaky ny inona ny fotoana voatokana handefasana azy any Sina ka ho any Sierra Leone?
Raha ny mahazatra, ny ora fitaterana dia miovaova be noho ny antony maromaro.
Azonao atao ny mamaritra ny fe-potoana miankina amin'ny vanim-potoana fitaterana sy ny fomba lozika hafa.
Maharitra tapa-bolana ny fikarakarana taratasy sy ny fikarakarana ny fangatahana.
Ny fandefasana azy dia mety miovaova eo amin'ny ora vitsivitsy ka hatramin'ny andro maromaro arakaraka ny fomba fandefasana.
Ny vokatra azo avy amin'ny mpamatsy dia mety andro vitsivitsy na volana vitsivitsy.
Raha fintinina dia azonao atao ny mandray anjara amin'ireto rehetra ireto mba hahitana ny fotoana mety ilana azy avy any an-tsambo mankany China Leone
Inona no tiantsika holazaina amin'ny hoe "Alefaso ny freight Quote" rehefa manafatra?
Beat My Freight Quote dia rehefa mifampiraharaha mivantana amin'ny mpiasan'ny mpitatitra matihanina ianao manana fahalalana tsara ao amin'ny faritra misy anao.
Ny fanontaniana rehetra dia hokarakarain'ny tompon'andraikitra eo an-toerana izay hanao fikarohana momba ny fifanarahana tsara indrindra ho anao.
Noho izany, ny fifanarahana rehetra dia eo anelanelan'ny mpandraharaha sy ny tenanao.
Ao amin'ny Beat My Freight Quote, tsy misy komisiona noraisina amina fifanakalozana rehetra ary afaka mamonjy be ianao.
Mba ho lasa lisansa Beat My Freight Quote Freight, ny mpitatitra entana dia tsy maintsy ho mpikambana ao amin'ny fikambanan'ny orinasa mandroso ho an'ny nasionaly.
Ary koa, ny mpitatitra entana dia tsy maintsy manome endrika avo lenta ny maha matihanina.
Amin'ny ankapobeny, ankatoavin'ny mpikambana FIATA na mpandraharaha IATA izy ireo.
Ahoana ny fomba handoavako vola amin'ny orinasam-pandefasana entana mifototra any Chine?
Ny iray dia afaka mampiasa rafitra famindrana vola handoavana ny kaontin'ireo bankin'ny orinasa any Chine.
Ny ankamaroan'ireto orinasam-pifamoivoizana ity dia hanana kaonty amin'ny banky mitarika toa ny HSBC (Hong Kong sy Shanghai Banking Corporation).
Ny mpitatitra entana dia mety tsara sy handray karama haingana.
Tsy manana volavolan-dalàna iray (B / L) aho, inona no tokony hataoko?
Azonao atao ny manambara ny nomeraon'ny lisitry ny lozisialy ho solon'ilay nomeraon'ilay "Bill of Lading (B / L)" ao amin'ny fangatahana fahazoan-dàlana.
Izany hoe raha tsy nomena ny volavolan-dalàna momba ny Lading ianao.
Azonao atao ny manavao ny vaovao, rehefa mahazo ny volavolan-dalàna momba ny Lading ianao amin'ny fandefasana fotsiny ny fampiharana efa nasiana.
Ahoana no fomba hiantoka ny fiarovana ny fanafarana entana avy any Shina?
Ny fanentanana mpandefa matihanina matihanina sy za-draharaha ihany no vahaolana eto.
Izy ireo no hikarakara ny fomba fiasa rehetra, na fampidinana na marika, fitaterana na fanadiovana.
Ireo mpiantsena fandehanana toy izany dia mahalala ny fitsipi-pitondrana sy fitsipika mifehy ny fanafarana avy any Shina mankany amin'ny Sierra Leone
Raha ny tena izy, ny fahazoana karatra matihanina matihanina dia hamonjy anao na ny fotoana.
Afaka mifandray aminay ianao amin'ny fomba th24 / 7 amin'ny alàlan'ny fax na mailaka. Azonao atao ny mitsidika manokana ny biraonay.
Miampy: Efitra A3 2F LianFa Trano No.199 Dongxin Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou 215124, Sina
© 2020. Suzhou Sohologistics CO., LTD. Zo rehetra voatokana. politika fiarovana fiainan'olona